कर्णको ‘सोच’ को सोचाई - दुनियाँको खबर
Home Archive कर्णको ‘सोच’ को सोचाई
कर्णको ‘सोच’ को सोचाई
on: २० असार २०७७, शनिबार ०६:१०
नेपाल भ्रमण बर्ष शुरु हुनु भन्दा अघि कर्ण शाक्यको नाम त्यति सुन्नमा आएको थिएन । त्यहि समयको सेरोफेरोमा मेरा एक मित्रले कुनै प्रसंगमा कर्ण शाक्य एउटा पर्यटन ब्यबसायी सिबाय अरु केही होईनन्। तर तिनैलाई नेपाल सरकारले पर्यटन बर्ष मनाउनको लागि बिज्ञको रुपमा मासिक डेढलाख पारिश्रमिक र अन्य सुबिधा दिएर नियुक्ति गरेको भन्दा म छक्क परें। छक्क मात्र होईन तीन छक्क परें। कारण थियो कुनै निकायमा नरहेको, अनुभव नभएको र गैर सरकारी क्षेत्रमा संलग्न भएको ब्यक्तिलाई नेपाल भ्रमण बर्ष जस्तो राष्ट्रिय महत्वको कार्यक्रममा नियक्ति गरीनु । त्यसो भन्ने ती मेरा मित्र अहिले नेपाल सरकारको उच्च ओहोदामा रहेका छन्। त्यस बखतको उनको त्यो भनाई मलाई सतप्रतिशत ठिक पनि लागेको थियो। कारण उनको भनाईले मलाई बिश्वस्त पारेको थियो र कर्णजीको बिषयमा म अनभिज्ञनै थिएं।
केही बर्ष पश्चात् कुनै एक कार्यक्रममा अर्का मेरा साथिले कर्ण शाक्य प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राख्दै भने ‘ सर तपाईंले कर्ण शाक्यलाई चिन्नु हुन्छ’ भनी सोधनी गर्दा म चिन्दीन भनेर जवाफ दिएको थिएं। तपाईले नचिने पनि उनीले लेखेको पुस्तक ‘सोच’ पढ्नै पर्छ एक पटक । जसरी भएपनि पढ्नु होला भनी सल्लाह दिएका थिए । उक्त पुस्तक पढ्ने मौका मिलेको थिएन र पढ्ने चाहना पनि राखेको थिईन मैले। मलाई ‘सोच’ भन्ने पुस्तक पढ्न प्रोत्साहन गर्ने ती ब्यक्ति अहिले पनि नेपाल सरकारको उच्च तहमा कार्यरतनै रहेका छन्।
केही दिन अघि मात्र मेरो जन्मथलो गाउं जांदा उक्त पुस्तक मेरो हातमा पर्यो। मैले पढ्न मन गरेपनि अनुकुल नपरेकोमा चिन्तीत भएको पनि थिएं। तर, अहिले पुस्तक हात परेकोमा ज्यादै खुसी पनि लागेको छ । उक्त पुस्तक प्रथम पटक ०६१ सालमा प्रकाशित भएकोमा ०६९ सालमा अर्थात ८ बर्षको अन्तरालमा ३० औं संस्करण प्रकाशित भई सकेको रहेछ । यसलेत मलाई झन् पढ्नको लागि कौतुहलता जगायो।
पुस्तक झट्ट हेर्दा अलि मोटो लागेपनि बिभिन्न २५ ओटा अनुच्छेदमा बिभाजन गरीएकोले पढ्नको लागि सहजनै लाग्यो। जति पढ्यो उति ज्ञानबर्धक र आनन्द हुंदै जाने कारणले कहिल्यै नसकिए हुंदो हो जस्तो लाग्यो पनि । कत्तिपनि पट्यार नलागिकन उक्त पुस्तक मैले अन्तिम पृष्ठसम्म अक्षरश पढ्न भ्याएं , बढो आनन्द र कौतुहलका साथ ।
धेरै मानिसहरु सकारात्मक सोच राखेर अघि बढ्नु पर्छ भन्ने गरेका हुन्छन्। यद्यपी उनीहरुले सोचलाई ब्यबहारमा परिणत भने गरेका हुंदैनन्। अरुलाई उपदेश दिन सक्नेले आफुलाई त्यहि अनुकुल ढाल्न सकेका हुंदैनन्। यसो हुनुका बिभिन्न कारण हुन सक्लान्। कतिपयको उनीहरुको आफ्नै ब्यक्तिगत पण्डित्याई हुन सक्छन् होला । तर, कर्णजीको यो पुस्तकमा उहांले भोग्नु भएका कतिपय समस्या एबं ब्यवधानहरुलाई ईमान्दारीता पुर्बक सकारात्मक सोच राख्नु भएको देखिन्छ ।
कर्ण शुरुमानै लेख्छन र्् सबैकुरा भर पर्छ मात्र सोचमा’ । यो कति महत्वपुर्ण वाक्य छ आफैमा र हाम्रो जीवनमा । हामीले हाम्रो जीवनमा यो वाक्यलाई आत्मसात गर्न सक्यौं भने हामीले कहिले पनि निरास हुनु पर्दैन । यसको लागि उनले कृष्ण, राम, गौतम बुद्ध द्रौपदी,अर्ज‘न, गणेशमान जस्ताको उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्। कृष्णलाई कर्मयोगी वा कपटी दुबै दृष्टि बाट हेर्न सकिएपनि मानिसको जीवनमा सकारात्मक कुराको भुमिका राम्रो हुने हुंदा कर्मयोगीको रुपमा लिनु पर्ने धारणा उनको रहेको छ । त्यसरीनै हजारौं बानर सेनालाई बलिदान गराउने अपराधीको रुपमा रामलाई लिनु भन्दा सीतालाई रावणको हात बाट बचाउन सक्ने मर्यादा पुरुषको रुपमा लिनुनै सकारात्मक सोच हो भन्ने कुरा उनले उल्लेख गरेका छन्। हुनपनि हो कुनै पनि बस्तुको दुई ओटा पाटा हुन्छन् , सकारात्मक र नकारात्मक । नकारात्मक बस्तुमा पनि कुनैन कुनै रुपमा सकारात्मक कुरा रहेका हुन्छन्। त्यसैले हामीले नकारात्मक भनेर पन्छाउनु हुंदैन भन्ने उनको भनाई रहेको छ । नकारात्मक सोच राखियो भने हामीले हाम्रो जीवनलाई निश्चयनै सार्थक बनाउन कठिन पर्ने हुन आउंछ ।
सकारात्मक सोचबारे कर्णले प्रस्तुत गरेका उदाहरणहरु यति बेजोड छन्की तिनीहरुको बारेमा आलोचना गर्ने कुनै ठाउंनै छैन । गौतम बुध्दलाई शान्तिदुतको रुपमा लिनेकी पलायनबादीको रुपमा ? द्रौपदीलाई देवी भन्नेकी पांच पुरुषका लागि एकल पत्नि ? अर्जुनलाई बीर पुरुष मान्नेकी बाणहानी अरुलाई मार्ने अपराधी मान्ने ? त्यस्तैगरी प्रधानमन्त्री दिंदा पनि स्वीकार नगर्नेलाई त्यागी भन्नेकी जिम्मेवारी दिंदा पनि नलिने कांतर गणेशमान भन्ने ? यी प्रश्नहरुको जवाफ अनुत्तरीत भएपनि सकारात्मक कुराहरुलाई लिई अगाडि बढ्नुले जीवनलाई सफलीभुत बनाउने हो भन्ने कर्णको सोच रहेको पाईन्छ ।
कर्णले आफ्नो सकारात्मक सोचलाई सबैले बुझ्ने गरी तथ्यांकमा ढालेको पनि देखिन्छ । उनको बिश्लेषण अनुसार ५ – ६ प्रतिशत मानिस सकारात्मक सोचका हुन्छन् भने १५ – १६ प्रतिशत मानिस नकारात्मक । ७९ – ८० प्रतिशत मानिस लहैलहैमा लाग्ने अनुमान छ उनको। करीब ५ प्रतिशत मानिसले आम जनतामा सकारात्मक सोच ल्याउनुपर्ने कार्य निश्चयनै ठूलो चुनौतीको रुपमा रहेको उल्लेख गरीएको छ । यसरी सकारात्मक सोच भएको सानो संख्याले नकारात्मक भएको ठूलो संख्यालाई आकर्षण गर्ने कार्य अहिले पनि हाम्रो समाजमा समस्याको रुपमा रहेको छ । सकारात्मक सोचको कुरा गर्दा जहांपनि संभब छ भन्न पनि सकिदैन । सहारा मरुभुमि जस्तो ठाउंमा अनेक प्रजातिका बोट बिरुवा, चरा चुरुंगीको आशा गर्न सकिदैन भन्ने भनाई बाट सकारात्मक सोच सापेक्षतामा भर पर्दो रहेछ भन्न सकिन्छ । यसरीनै नेपाल खतम छ भन्नेहरुको लागि पनि दरिलो जवाफ दिएको पाईन्छ । काम गर्न सक्नु पर्छ ,जे काम गरेपनि हुन्छ, यदि सकारात्मक सोच लिन सकियो भने। ईच्छा शक्ति भयो भने हामीसंग भएको सीमित साधन श्रोत बाट पनि अकल्पनीय ठूला कार्य गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोण उनमा रहेको पाईन्छ ।लेखकर्ले न’ भन्ने शब्दलाईनै नकारेका छन्। यो भएन, त्यो भएन, भनेर कुनै कुरालाई नकार्नु भन्दा नकारात्मक कुरामा पनि सकारात्मक पक्ष हुन्छ भन्ने तिर हामी सबैको ध्यान जानु पर्छ भन्ने उनको सुझाव छ । जसरी जुनसुकै बादलमा चांदीको घेरा हुन्छ भन्ने हामी सबैलाई अबगत भएकै कुरो हो।
(हाम्रो देशमा भएका गौरबमय सम्पदाहरु बारे पनि कर्णले राम्रोसंग उल्लेख गरेका छन्। नेपाल खत्तम भयो, नेपाल बिग्रियो भन्नेहरुका लागि आधुनिक ज्ञान र प्रबिधि बिनानै ठूला ठूला आश्चर्यजनक मठ, मन्दिर, स्तुपा, पाटी, पौवा बनाईएका छन्। हाम्रा पुर्खाहरुमा सकारात्मक सोच नभएको भए यी सम्पदाहरु कसरी निर्माण हुन सक्थे होलान् ? हामीहरुले पुर्खाको योगदानलाई अनुसरण गरी अगाडि बढ्नु पर्ने आबश्यकता तड्कारो रुपमा देखिएको छ ।
हामी नेपाली आफु काम नगर्ने र अरुले गरेको काममा पर निर्भर हुने बानी बसिसकेको छ । आजभोली पनि गाउंघरमा आईमाईहरुले हलो जोत्ने काम बाहेक अरु सबै काम गरेका हुन्छन् भने पुरुषहरु यो भएन, त्यो भएन, फलानो यस्तो, ढिस्कनु यस्तो,फलानो भ्रष्टाचारी आदि ईत्यादि भनेर समय कटाई रहेका देखिन्छन्। तैपनि महिलाले घर थेग्न पुर्याएका योगदानलाई चटक्कै बिर्सिएका हुन्छन्। उनीहरुले गरेका परिश्रमको मुल्यांकन समेत गरेका हुंदैनन्। यदि पुरुषहरुले पनि सकारात्मक सोच लिएर अगाडि बढि दिएको भए नेपाल कहां पुगि सक्थ्यो होला भन्ने बिचार लेखकमा रहेको पाईन्छ । यसै सन्दर्भमा लेखकले एउटा सटिक उदाहरण उल्लेख गरेका छन्। हिरा खानीमा हिरा पाईन्छ, हिरा निकाल्नको लागि गहिरो कोईला खानीमा हिरा पाउन कालाम्मै हुनु पर्दछ । यसको अर्थ हो अबसरलाई ग्रहण गर्नको लागि सकारात्मक सोच हुनै पर्दछ ।
लेखकले उल्लेख गरेको एउटा प्रसंग यहां मलाई पनि प्रस्तुत गर्न मन लाग्यो। एक पटक उनी सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीमा भागलिन संयुक्त राज्य अमेरिका गएका रहेछन्। उक्त गोष्ठीमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपालको कुल राष्ट्रिय उत्पादन न्ल्एन्युन भएपनि न्ल्ज् अति उच्च भएको बताएछन्। न्ल्ज्शब्दले सबै सहभागिहरुको दिमाग रन्थनिएछ ।न्ल्एत सबैले बुझेका । न्ल्ज् कसैले पनि नबुझेकाले उनीहरु सबैलाई कहां बाट आयो यो शब्द भनी कौतुहल जागेको रहेछ र न्ल्ज् भनेको के हो भनेर प्रश्न गरेछन् पनि । न्ल्ज्भनेकोन्चयकक ल्बतष्यलब िज्बउउष्लभकक हो भनेपछि सबै सहभागिलाई अनौठो लागेछ र पछि गएर गोष्ठीको नामनै ज्ब्एक्ष् राखिएछ । जसको अर्थ थियो ज्भचष्तबनभ या ब्कष्ब बलम एबअषष्अ क्ष्कबिलम। यहाँ यो घटना उल्लेख गर्नुको मनसाय दृढताकासाथ सकारात्मक सोच लिएर अघि बढ्ने हो भने निश्चयनै गन्तब्यमा पुग्न सकिदो रहेछ ।
सकारात्मक सोचलाई लिएर उनले खानेमुखलाई जुंगाले छेक्दैन भनेर पनि कुनै ठाउंमा लेख्न भ्याएका छन्। मार्फामा ब्राण्डि आबिष्कार गर्ने पासाङ् कुन्छेन शेर्पा, नाङ्लो रेष्टुरेण्ट संचालन गरेर अपांग बहिराहरुलाई रोजगारी दिने श्याम कक्षपति जस्ताको उदाहरण उल्लेखनीय छ । यिनीहरुको सकारात्मक सोचाई आजको युबा बर्गको लागि उदाहरण हुन सक्दछ ।
(तर, त्यो जंगल महेन्द्र कुन्जका रुपमा सीकार गर्ने ठाउं भएकोले चिफ कन्जरभेटरले दरबारमा प्रस्ताब पेश गर्ने आंटै गरेनछन् र प्रस्ताब त्यसै थन्क्याएर राखेछन्। यता कर्णलाई भने आफुले पेश गरेको प्रस्ताब के भयो भन्ने बारे खुल्दुली
भईनै रहेछ र प्रस्ताब स्वीकृति हुनेछ भन्ने आशामा उनी रहेछन्।
आफ्नो मनको खुल्दुली मेटाउन उनले चिफ कन्जरभेटरलाई भेट्ने ईच्छा गरेछन्। चिफ कन्जरभेटर बाथरुमबाट फर्किदै गरेका बखत आफुले पेश गरेको प्रस्ताब बारे जिज्ञासा राखेछन्। अति हंसिलो अनुहार बनाउंदै चिफ कन्जरभेटरले भनेछन् “ अं, यहां पनि जंगल छ, एउटा दुईटा जनावर पनि होलान्, के यहां पनि राष्ट्रिय निकुन्ज बनाउछस् ?” भन्दै नाईटो मुनीको भाग देखाएछन्। पछि बुझ्दा थाहा भएछ, उनले त्यसो भन्नुमा उक्त बन क्षेत्र राजाको निजी बन पो रहेछ ।
यस्तो हुंदापनि सकारात्मक सोच र आफ्नो बिचारमा दृढ संकल्पित भएका कर्णले हार खाएनन्। जसरी भएपनि उक्त क्षेत्रलाई राष्ट्रिय निकुन्ज बनाई छाड्ने कार्य बाट उनी पछाडि हटेनन्। कर्णको अथक प्रयास र अठोटले गर्दा पछि गएर सन् १९६९ मा राप्ती पारीको सम्पुर्ण क्षेत्रलाई राष्ट्रिय निकुन्ज बनाई छाडे। हुनत यो प्रस्ताव स्वीकृत गराउनको लागि उनले राजादेखि रंकसम्म पनि पुग्न परेको कुरा बिस्तृत रुपमा उल्लेख गरेका छन्। अठोट र सकारात्मक सोच राखेर अघि बढियो भने राजाको निजी बन पनि राष्ट्रिय निकुन्ज बनाउन सकिदो रहेछ । यस दृष्टान्तले निश्चयनै आजका युवा बर्गलाई हौसला प्रदान गर्ने नै छ ।
कर्ण लेख्छन् “ मेरो लामो जिन्दगीमा आफ्नो लक्ष उच्च राख्नु पर्छ किनभने मैले धेरै काम गर्न बांकि नै छ ” । सरकारी सेवामा बसेर सिर्जनशील काम गर्न धेरै कठिन हुने उनले बुझे पछि सन् १९७० मा वन अधिकृतको पदबाट राजिनामा दिन पुगेछन्। अहिले उनले गरेका कामहरुको दृष्टान्तले निश्चयनै धेरै उद्यमी र ब्यबसायी सफल भएका पनि होलान्। उनले गरेका राष्ट्रिय महत्वका कार्यले महत्वपुर्ण भुमिका पनि खेलेका देखिन्छन् नै।
प्रकृति प्रेमी र सकारात्मक सोच भएका कर्णले डोल्पाको बिषयमा म्यउिय नामक एक कृतिनै प्रकाशित गरेका छन् र किताबको अन्त्यमा अंग्रेजीमा एउटा कविता पनि लेखेका छन्। यस बाट यो बुझ्न सकिन्छ की उनी एक प्रकृति प्रेमी मात्र नभई एउटा कबि पनि रहेछन्। सकारात्मक सोच बारे उनको गहिरो चिन्तन भएको पाईन्छ । कुनै बिषय बारे कुनै चिन्तन मनन गर्नु पर्यो भने उनी निधारको मध्य भाग जहां हामी टिका लगाउंछौं त्यहि भागमा औंलाले रगडेर बिचार गर्यो भने अनगिन्ती चमत्कारी कुरा भेट्न सकिने सुझाब उनको छ । जसरी सलाईको कांटी रगड्दा आगो उत्पन्न हुन्छ , त्यसरीनै निधारमा औंलाले रगड्दा सकारात्मक बिचार उत्पन्न हुने कुरा उनको बिश्वास छ ।
त्यस बखतको काठमाण्डौ नगरपालिकामा भएको सिमित श्रोत र साधनलाई मध्यनजर गरी नेपाल संपदा संघ र होटल संघ नेपालको संयुक्त आयोजनार्मा लौन केही गरुं‘ भनी १०१ वोटा सुझाव संकलन गरी दुबै संस्था बाट पारीत गराई नगर पालिकामा पेश गरे पनि त्यहां त्यसै थन्किएको उनको गुनासो छ । सकारात्मक सोच लिएर अघि बढेपनि सफल हुन निकै कठिन हुने कारण उच्च तहमा सकारात्मक सोचको अभाव हो भन्ने कुरा अनुमान गर्न सकिन्छ ।
अझ रोमन्चकारी कुरोत उनी प्रधानमन्त्री भएको भए यी यी काम यसरी गर्ने भनी २९ वोटा बुंदा उल्लेख गरेका छन्। निश्चयनै केही गरुं भन्ने सकारात्मक सोचाई भएका कर्णको बुंदालाई कसलेपो अपनाउँथ्यो र ?
( म न खिया लागेको संरक्षणबिद् हुं , न त अन्धो विकास प्रेमी ” । उनको यस भनाई बाट यो बुझिन्छ की उनी सच्चा संरक्षणविद् एवं विकास प्रेमी नै हुन्।
त्यसै कारणले गर्दा विकास गर्दा संरक्षणलाई प्रतिकुल असर नपर्ने गरी गर्नु पर्ने उनको सकारात्मक सोच भएको पाईन्छ ।उनको श्रीमति र छोरी दुबै क्यान्सर रोगबाट बितेका हुंदा उनको ह्ृदयमा गहिरो चोट परेको रहेछ । त्यसैको पिडाले गर्दा एउटा छुट्टै क्यान्सर अस्पताल बनाउने सकारात्मक सोच राखेर सफल पनि भएको कुरो उनले उल्लेख गरेका छन्। त्यस समयमा एउटा अन्कोलोजिष्ट समेत नभएको समयमा स्वास्थ्य सेवाको स्थिति कस्तो र कति सम्म नाजुक रहेछ भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस बखतकोे स्वास्थ्य अबस्थालाई सुधार गर्न सक्नुमा कर्णजीको ठूलो योगदान अवश्यनै देखिन्छ । आफ्नो श्रीमति र छोरीको क्यान्सरको उपचार गर्न उनले बिदेशमा गएर ठूलो रकम खर्च गर्नु परेको सन्दर्भमा सामान्य मानिसले कसरी उपचार गर्न सक्दछन् भन्ने चिन्ता उनमा रहेको देखिन्छ । त्यसकारणले गर्दा पनि होला उनी यस क्षेत्रमा लागेका । उनको योगदान यस क्षेत्रमा मात्र छ भन्दा उनलाई अन्याय पनि हुन जाला । कारण उनी व्यक्ति एक भएपनि उनको कार्य क्षेत्र बिभिन्न भएको पाईन्छ । क्यान्सर अस्पताल स्थापना गर्नको लागि उनले गरेका प्रयासहरुको आंकलन गर्दा जोसुकै पनि आश्चर्य हुनु पर्दछ । लेखक भन्छन् “ समस्या मानिसहरुको लागि अभिसाप होईन, यो त प्रगतिको खुड्किलो हो ” । जीन्दगीमा समस्यै आएन भने मानिसले कसरी प्रगति गर्न सक्छ र अगाडि बढ्न सक्छ ? समस्यालाई समस्याको रुपमा नलिई अबसरको रुपमा लिनु पर्छ भन्ने उनको सुझाउ पनि रहेको छ । उनी फेरी लेख्छन् “ जो अभागि छ, उसलाई समस्याले सताउंदैन” । मुर्ख्हरु मात्र समस्याबाट ंभाग्छन् वा अल्झिन्छन्” । उनको यो भनाई कति ज्ञानबर्धक र मार्मिक छ ? यदि हामीले यी वाक्यहरुको मर्म बुझ्न सक्यौं भने निश्चयनै हाम्रो जीवन सफल मानिनेछ । त्यसैले जहिले पनि सकारात्मक सोचको हामीलाई आवश्यकता परिनै रहेको हुन्छ ।नेपाल खत्तम छ भन्नेहरुको लागि नेपाल यसकारण खत्तम छैन भनी दरिलो तर्क एबं उदाहरण दिएका छन्। शिक्षा,स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात,पर्यटन आदि क्षेत्रमा भएको प्रगति के प्रगति होईन र ? हो, निश्चयनै हुनुपर्ने जति प्रगति भएको छैन ।तर, नेपाल खत्तमै भने भएको छैन । प्रगतिका किरण भने अनगिन्ति भएको उनको भनाई छ । सुरक्षाको कुरा गर्दा नेपालमा भन्दा पनि अन्य कतिपय देशहरुको सुरक्षा डरलाग्दो भएको कुरा उनले उदाहरण स्वरुप प्रस्तुत गरेका छन्। अरब– ईजरायलको युद्ध, अमेरिकी ट्वीन टावरको ध्वस्तता, ईन्डोनेशिया,स्पेन, मनिलाको सुरक्षा स्थिति बारे उल्लेख गरेका छन्। हामीले देखेकै कुरा हो अहिले कुनै पनि देश पुर्ण रुपमा सुरक्षित भएका छैनन्। कहिले काहिं ध्वंसात्मक गतिबिधिको कारण बाट मानबिय एबं भौतिक क्षति भएको पाईन्छ । बरु अन्य देशको तुलनामा नेपाल बढि सुरक्षित भएको उनको भनाई रहेको छ । त्यसैले नेपाल खत्तम छैन । बरु हाम्रो मानसिकतामा बिकृति आएको भन्न सकिन्छ । यदि सकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने नेपाल क्रमिक रुपले अघि बढ्दै आएको छ । कुनै काम शुरु गरेपछि अन्त्य गरीकन छाड्ने अठोट गरीयो भने निश्चयनै सफल भईन्छ भन्ने उदाहरण उनले आफ्नै प्रस्तुत गरेका छन्। नेपाल भ्रमण बर्ष सफल बनाउन उनले दिनको २० घण्टा सम्म काम गरेको कुरा उल्लेख गरेको पाईन्छ । कामै नगर्ने हो भने कसरी अघि बढ्न सकिन्छ र ? त्यसैले काम गर, फलको आश नगर भन्ने उपदेशसंग उनको बिचार मिल्दो जुल्दो देखिन्छ । त्यसरीनै कुनै कुरालाई सकारात्मक दृष्टिकोण बाट हेर्नु पर्दछ भन्ने सन्दर्भमा गिलासमा भएको पानीलाई उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गरेका छन्। गिलासमा भएको पानीलाई आधा खाली छ भनेर हेर्ने होईनकी आधा भरी सकेको छ भनी सकारात्मक दृष्टिकोण राखेर हेर्नु पर्ने उनको सुझाव छ । उनको परिवारका सदस्यहरु प्नि सकारात्मक चिन्तन बाट चलि आएको कुरा आमाको मृत्यु पश्चात भएको अंशबण्डा बाट ज्ञात हुन आउंछ । अहिलेको हाम्रो समाजमा दाजुभाई बिच हुने अंशबण्डामा ठूलो झैझगडा भई आएका थुप्रै दृष्टान्त देखिएकै छन्। दाई भाई बिच सक्नेले सम्पत्ति लुकाउने, लुट्ने, ठग्ने, फट्याई गर्ने, सांधकिल्ला मिच्ने,आलि डिल सार्ने जस्ता नकारात्मककार्यहरु भईनै रहेका छन्। तर, उनीहरुको जति पनि सम्पत्ति छ, दुई भाई बिच बराबर बिभाजन गरेर समस्या उत्पन्न नहुने ब्यबस्था गरेको उदाहरणले यी दुई दाजु भाई बिच कति राम्रो सकारात्मक बिचार रहेछ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ नै। बिश्वको कुल जमिनको ०.१प्रतिशत मात्र भुभाग भएको अर्थात १,४७,१८१ बर्ग किलोमिटर सानो भुभागमा बिभिन्न किसिमका जीवजन्तु भएको पाईन्छ । त्यसैगरी १०० मिटर उचाई भएको तल्लो भुभाग देखि ८८४८ मिटर उचाई भएको बिश्वको सबभन्दा उच्च हिमाल सगरमाथा बिश्वकै आकर्षणको रुपमा रहेको छ ।
उचाई बढ्दै जांदा हावापानी तथा जलबायुमा आउने परिबर्तनको कारण मानिसको रहनसहन,चालचलन, भाषा, बोलीचाली, भेषभुषा, लबाई खुवाई आदि जस्ताले दिनचर्यामा पृथकता आउनु स्वभाबिकै हो। यस प्रकारको पृथकतानै नेपालको लागि प्रकृतिले दिएको अपार बरदान भन्न सकिन्छ । हाम्रोदेशको भुबनौटको दृष्टिकोण बाट हेर्ने हो भने यहां अनगिन्ती बिकासका संभावना छन्। यिनीहरुको परिचालन गर्न सक्नुनै आजको आबश्यकता हो भन्ने कुरा लेखकले औल्याएका छन्। त्यसैगरी चुनौतीहरुलाई अबसरको रुपमा स्वीकारी सकारात्मक सोचाई राखेर अघि बढ्नु पर्ने उनको सुझाव छ । सकारात्मक सोचाईको परिणामस्वरुप देशको करीब १८ प्रतिशत भुभाग राष्ट्रिय निकुन्ज बन्न सकेको छ । कर्ण लेख्छन, पैसा कमाएर धनी भएर मात्र मानिस सफल भएको मानिन्छ हाम्रो समाजमा । तर, त्यसो हुंदै होईन । सफल मानिस त्यो हो जसले समाज बाट ईज्जत पाउन सक्छ । पैसा, धनसम्पत्ति र सामाजिक ईज्जत पृथक कुरा हुन्। सम्पत्तिवाल मानिस समाज बाट घृणित हुन सक्छ, तर, समाजमा ईज्जत भएको ब्यक्ति कहिले पनि घृणित हुन सक्दैन । उसलाई सबैले ईज्जत गरेकै हुन्छन्। त्यसैले सकारात्मक सोचाई नै कुनै पनि व्यक्तिको लागि गहना हो भनिन्छ । मैले माथिनै उल्लेख गरी सकेको छु, कर्ण शाक्य बिभिन्न व्यक्तित्वमा चिनिएका छन्। कुनै ठाउंमा उनी ब्यापारिकका रुपमा परिचित छन् भने कुनै ठाउंमा उद्योगी र अनि कतै समाजसेबीको रुपमा । अनि कतै सम्पदाबिद एवंं संरक्षणविदको रुपमा । कतै परिकल्पनाकारका रुपमात कतै योजनाकारका रुपमा ।
उनको मन्मा जे काम गर्ने सोच आउंछ, उक्त काम गरी हाल्ने सकारात्मक सोच उनमा उत्पन्न भैहाल्छ र फत्तेपनि गरीहाल्ने बानी उन्मा रहेको पाईन्छ । टुंडिखेलको बाटो, केशरमहलको स्वप्न बगैंचा, क्यान्सर अस्पताल, मेडिकलसिटी, भ्रमण बर्ष जस्ता राष्ट्रिय महत्वका कार्यहरु उनकै निरन्तर प्रयासबाट सम्पन्न भएका छन्।
तर, उनले यो भन्न छुटाएका छैनन्की यी सबै काम उनको एकल प्रयास बाट मात्र सम्पन्न भएका होईनन्। यसमा अरु धेरै सहयोगी हातहरुको योगदान पनि त्यतिकै रहेको छ ।कर्ण यस्ता ब्यक्ति रहेछन् जसले आफु मात्र सफल हुन चाहंदैनन् । उनले अरुलाई पनि सफल उद्यमी बन्नको लागि बिभिन्न ११ ओटा क्याप्सुल सुझाएका छन्। जसमा कुनै पनि मानिस सफल उद्यमी बन्नको लागि सर्ब प्रथम उसमा काम गर्ने आकांक्षा, विश्वास, बिश्लेषण गर्ने क्षमता, आफुले तयार गरेको खाकालाई कार्यान्वयन गर्ने तरीका जस्ता महत्वपुर्ण सुझाब दिएका पनि छन्। उनी लेख्दै जान्छन् यदि मानिसले राम्रो धारणा राख्न चाहन्छ भने नकारात्मक सोच दबाउन धेरै कठिन हुंदैन ।
कर्णको विषयलाई लिएर उच्च तहका दुई कर्मचारीको बिचार बारे माथि पनि केही उल्लेख गरीएको छ । एक कर्मचारीले उनलाई सकारात्मक सोच भएका ब्यक्ति हुन् र उनले लेखेको पुस्तक ‘सोच‘ पढ्नै पर्ने सुझाव मलाई दिएका थिए ।
अर्का कर्मचारीले भने उनी एक उद्यमी बाहेक केही हुंदै होईनन् र उनलाईसरकारले ठूलो धनराशी खर्च गरेर बिज्ञको रुपमा नियुक्ति गरेको कुरा । तर, वास्तविक कुरो भने अर्कै रहेछ । नेपाल भ्रमण बर्षको लागि करीब २ बर्ष सम्म काम गर्दा उनले १ पैसा पनि लिएका रहेनछन्। यो कुरा उनले सोच मा कतै लेखेका पनि छन् ।
मैले यहां उल्लेख गर्नुको अर्थ हाम्रो प्रशासकिय व्यवस्थामा त्यस्ता नकारात्मक सोच राख्ने मान्छे पनि रहेछन् भन्ने नै हो। यस बाट यो प्रष्ट हुन आउंछकी कर्णको सोचलाई लिएर खुट्टा तान्ने प्रबृत्तिको पनि विकास भएको रहेछ । हुनत कर्णले ठाउ ठाउंमा उनकै साथिहरु बाट अप्रत्यक्ष किसिमले उनलाई बाधा पुर्याएका कुरा पनि संकेत गरेका छन्। मलाई लाग्छ कर्ण जस्तै सकारात्मक सोच राख्ने छरिएर रहेका ब्यक्तित्वहरुलाई एकै ठाउंमा ल्याई एउटा समुह गठन गर्न सकियो भने त्यो समुहले निश्चयनै देशको लागि महत्वपुर्णयोगदान दिन सक्नेछ । (लेखक नेपाल सरकार पूर्ब उप सचिब हुनुहुन्छ ।)